Waa maxay Manager Samsung Gear?
Tababare Samsung Gear waa app ah Android ee ay Samsung. Tababare Samsung Gear, markii lagala soo bixi oo lagu rakibay on telefoonka kuu ogolaanaya in aad ku xidhi (labada ciyaaryahan) aad Samsung Gear smartwatch in telefoonka.
Marka labada qalabka lamaanahaaga kasta oo kale, waxa aad maamuli kartaa Samsung Gear midig ka smartphone Samsung oo isticmaalaya Manager Samsung Gear ah. Tan la yaabka lahaa yaraynaysaa aad ka kaaftoomi ee configuring aad smartwatch ka screen yar oo cabbirkooda, laakiin waqti isku mid ah oo kuu ogolaanaya inaad si ay u helaan farriimaha kala duwan oo ku yaal, halkan ka baabi'inta baahida qaadashada telefoonka ka soo jeebkaaga gaar ahaan markii aad baabuur wadayso.
Sida loo Suuqa rakib Manager Samsung Gear
Ku xiridda Manager Samsung Gear ku saabsan telefoonka Samsung waa quruxsan fudud oo toos ah. Si kastaba ha ahaatee waa inaad hubisaa in smartwatch Samsung Gear waa la jaan qaada telefoonka. Waqtiga qoraalkan, ka smartwatch Samsung Gear waa socon oo keliya Note Samsung Galaxy 3 ah iyo la filayaa inuu la jaan qaada Samsung Galaxy Note 4 sidoo kale.
Marka aad hubto in labada qalabka lihin in midba midka kale, oo aad kala socon kartaa tilmaamaha hoos ku siiyo si loo soo dajiyo Manager Samsung Gear aad smartphone Samsung:
2. Hubi in uu leeyahay xidhiidh ah Internet firfircoon.
3. Fur dhaansha Apps. 4. Ka calanka u soo bandhigay, ka jaftaa Galaxy Apps .
5. Haddii aad isticmaalayso Galaxy Apps markii ugu horeysay, oo ku soo bandhigay Shuruudaha iyo qodobada uu furmo, akhri shuruudaha iyo xaaladaha u ah barnaamijka, si taxadar leh oo tuubada OGOLAADAY ka hooseysa.
6. Laga bilaabo interface ka Galaxy Apps soo baxa, Search tuubada ka dhinaca kore ee midig.
image tallaabo 5 image tallaabo 5
7. In beerta raadinta, ku qor Maareeyaha Samsung Gear .
8. Laga soo bandhigay talooyin, ka jaftaa Manager Samsung Gear .
9. Dhinaca interface soo socda, tuubada Samsung Gear Manager app ee icon.
10. Laga soo Details uu furmo suuqa, ka jaftaa soo dajiyo .
image tallaabo 8 image tallaabo 9 image tallaabo 10
11. On the rukhsadda App uu furmo suuqa, tuubada aqbalaan oo DOWNLOAD ka hooseysa.
12. Sug inta Manager Samsung Gear la soo bixi oo lagu rakibay on your smartphone Samsung.
image tallaabo 11 image tallaabo 12 image tallaabo 12
Sida loo Download Manager ee Samsung Gear .APK File
Tan iyo app waxaa si toos ah lagala soo bixi karaa Suuqa, guud ahaan looma baahna in aad file .APK ee Manager Samsung Gear haddii aad qorshaynaysid in ay u soo dajiyo kasta oo smartphone aan Samsung.
Sidoo kale, si ay u helaan file .APK ee app ah, waxaa loo baahan yahay in aad soo booqato goobta wax aan rasmi ahayn oo gudbin kara wax script waxyeello u leh telefoonka. Xataa waxaad soo saaro kartaa file .APK ka rujin phone Samsung, laakiin aad u baahan tahay si ay u qoto dheer u qodaan ilaa geedaha gal si aad u heshaan.
Waxa intaa dheer in, waxaa jira workaround kale Macdan file .APK kasta (oo ay ku jiraan Samsung Gear.apk) ka smartphone Android inta aad qabto smartphone labaad socda nidaamka qalliinka Android.
Si aad u soo saaro file .APK Macalinka Samsung Gear ka aad casriga Samsung, waa in aad raacdo tilmaamaha hoos ku siiyo:
1. Power on your casriga ah Samsung iyo download iyo rakibi Manager Samsung Gear ku waa adigoo raacaya tilmaamaha ku xusan siiyo.
2. Laga mobile aad laftiisa, u tag Google Play Store iyo dejisan iyo rakibi SHAREit.
3. Power on your smartphone labaad iyo download iyo rakibi SHAREit telefoonka iyo weliba.
4. Marka lagu rakibay, SHAREit bandhigista telefoonka iyo interface ugu horeysay, tuubada heli telefoonka u helo qaab.
5. Marka sameeyo, dib aad casriga Samsung ka meesha aad rabto in aad ku jiid file Samsung Gear.apk, abuurtaan SHAREit sidoo.
6. Laga bilaabo interface hore ee SHAREit, tuubada Send Badhanka.
7. On the Click in ay doortaan uu furmo, tag App category by kabacdi shaashadda bidixda (ama midig).
8. ka mid ah liiska soo bandhigay ee Chine lagu rakibay, ka jaftaa Samsung Gear.apk .
9. From hoose ee interface ah, ka jaftaa Next .
image tallaabo 6 image tallaabo 9
10. On the aqbalana Select uu furmo suuqa, ka jaftaa icon ee smartphone labaad Android meesha aad rabto in aad file .APK ku soo diri.
Fiiro gaar ah : On the aqbalana Select uu furmo suuqa, icon qalab diraha ku jiraa bartamaha iyo walxood oo dhan qalabka aqbaliddoodii waxaa la geeyaa u joogo.
Fiiro gaar ah : The User icon waa phone aqbalana tusaalahan ka.
11. Sug inta ay Samsung Gear.apk file waxaa loo wareejiyey phone bartilmaameedka.
12. Tubada Finish uga baxdo SHAREit.
image tallaabo 10 image tallaabo 12
Sida loo isticmaalo Manager Samsung Gear
Ka dib marka aad ku rakibtay Manager Samsung Gear aad smartphone Samsung, waxaad bilaabi kartaa waxaa ka garab adigoo raacaya tilmaamaha hoos ku siiyo:
2. aad casriga ah, u tag Settings .
3. Laga soo Settings uu furmo, shid labada NFC iyo Bluetooth .
4. Laga soo dhaansha Apps ku saabsan telefoonka, ka jaftaa Samsung Gear ku abuurtaan app.
5. Laga soo bilaabo interface furay, ka jaftaa baaritaan ka hooseysa iyo ka tago telefoonka ee raadinaya hab.
6. Next, awoodda aad smartwatch Samsung Gear.
7. Marka gaadhka jirtey ayaa u, baadhaan, waayo, qalabka socon heli karo.
8. Marka aad telefoon Samsung la ogaado, ka jaftaa in ay doortaan telefoonka iyo xaqiijin xidhiidhka (garab) ku smartwatch iyo smartphone.
9. Marka xiran, bilaabin isticmaalka qalabka sida caadiga ah.
Sida loo xidid Your Samsung Gear
Afjarno wax qalab Android (casriga ah ama smartwatch) ku siinayaa mudnaanta dabranayn qalabka in la isticmaalayo oo aad samayn kartaa isbedel kala duwan iyo reserved kartaa goobaha qarsoon oo aan suurto gal ah haddii kale.
Tan iyo Samsung Gear ayaa sidoo kale isticmaala Android, waxaa la mid aad u rujin karo. Mid ka mid ah faa'iidada ugu weyn ee soo afjarno Samsung Gear waa in aad u xubnuhu karaan qalab kasta oo Android, sida ay xannibaad in la isticmaalo oo keliya telefoonada Samsung laga saaro.
Si kastaba ha ahaatee, soo afjarno qalab aad maqani waxa ay damaanad iyo haddii tallaabooyinka aan si sax ah la sameeyaa, marka aad xitaa leben qalab aad u wanaagsan. Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamaha saxda ah ee soo afjarno aad Samsung Gear waxaa laga heli karaa xiriirka hoose oo ku siiyey;
Dheeraad ah oo halkan waxaad ka akhrisan kartaa: http://blog.laptopmag.com/how-to-root-galaxy-gear
Sida loo Cusboonaysii Samsung Gear Isticmaalka Windows ama Mac PC ah
Sida dhammaan qalabka kale smart, xitaa Samsung Gear u baahan yahay warbixin joogto ah si ay u flawlessly qabtaan. Marka laga madal computerka kale ee aad isticmaasho (Windows ama Mac), waxaad isticmaali kartaa Samsung Kies si aad u cusboonaysiiso Samsung Gear in tallaabooyin yar oo sahlan. The tilmaamaha ku saabsan sida aad u heli karto sameeyo waxaa laga heli karaa xiriirka hoose oo ku siiyey;
Dheeraad ah oo halkan waxaad ka akhrisan kartaa: http://www.connectedly.com/how-update-galaxy-gear-kies
Samsung Gear waa hab caqli ah si ay u helaan oo dhan farriimaha muhiim ah oo laftiisa iyo Samsung Gear Manager app kaalin weyn in this wakhtiga ula socoto aad ka jabisay gacanta. Degsado iyo la isticmaalayo Manager Samsung Gear si hufan waa mid aad u muhiim ah marka la isticmaalayo smartwatch ah sida Samsung Gear.
> Resource > Android > An Ultimate Tusaha Tababaraha Samsung Gear